Yiziphi The Famous Iningi Futhi zomlando zemininingwane Imizila | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Yiziphi The Famous Iningi Futhi zomlando zemininingwane Imizila
Umsindo whooshing isitimela umdwebo ibe esiteshini, kanye nokwenzeka ukuthola futhi uya endaweni ethile ngokuphelele ezingalindelekile. Ungacabanga yini ungcono Famous and Historical zemininingwane Imizila?
Izitimela Uyi Isikhumbuzo Yokuchuma travel. Lapho abantu bahamba izinyanga ngesikhathi futhi mhlawumbe amahhashi Kwakuhileleke. Izikhangibavakashi kwakungelona yangaleso sikhathi kuphela ngabomvu lapho uya khona.
Ayikho, travel kwakusho ejabulela uhambo. Packing in iziqu, futhi mhlawumbe ikhampasi futhi eziningana amabalazwe ezinhle. Izikhangibavakashi kwakusho uya indawo lapho ubukwazi akekho, lapho ngisho emoyeni wazizwa ongaziwa futhi incwadi yakho ekhaya angafika nje ngemva kokubuya yakho.
Ngo bazohlonipha imodi othokozisa kakhulu yezokuthutha, Londoloza Isitimela ikulethela uhlu Famous yomlando imizila isitimela kufanele uthathe e 2019!
London Venice phezu Orient Express – I Longest Famous and Historical zemininingwane Imizila
Lokhu kuzokwenza kunazo nakanjani kabili njengomnikelo usuku mlando! Cishe lena yiyona kakhulu Famous and Historical zemininingwane Imizila kanye isitimela romantic umzila emhlabeni. Isuka kusukela Paris eya edolobheni WaseByzantium Istanbul. Ungase ngu ithikithi ejwayelekile kusukela GcinaATrain ukuhamba kulo mzila, noma ukhethe inketho bubuhle kakhulu futhi hop phezu Orient Express. I nozungu kwalesi sitimela okunethezeka ukuthi adumileyo aphefumulelwe Agatha Christie. Kulezi zinsuku ayisekho nokusebenza ku ifomu yayo yasekuqaleni kodwa umoya walo iphila e Belmond sika Venice-Simplon Orient Express. Kukhona izitimela ezimbili, Empeleni, eyodwa nge namakalishi yangekhulu 1920 futhi 30s kanti omunye mlando saseBrithani Pullman isitimela.
Umzila omusha wind isendleleni esuka London Venice, ngezinye izikhathi kuhlanganise nezinye izindawo eYurophu, kanye kanye-engu-original Paris-Istanbul uhambo ngo-August.
Amathikithi eMilan ukuya eVenice Isitimela
UFlorence kuya amathikithi wesitimela iVenice
I-Bologna kuya amathikithi wesitimela iVenice
Amathikithi eRoma ukuya eVenice Sitimela
Kumele ukuhamba esitimeleni ukuthi kungenziwa athuthwe esikebheni. Lo is impela omunye Famous yomlando imizila isitimela kufanele uthathe e 2019!
Ngakho, kwenzekani uma ufika Ferry? Ngenhlanhla abagibeli isitimela bayakwazi ukuthola esitimeleni futhi ujabulele indawo kanye abebegibele isikebhe. Uzoba ukuwela ulwandle iBaltic e 45 amaminithi. Yonke uhambo isitimela ihlala 4 amahora 45 amaminithi. Copenhagen rye elalivuliwe abami sandwich futhi Amazing design tebuciko kuyinto enengqondo ithikithi isitimela sisuka amatasatasa Hamburg, Germany ukuthi you fantshi Yiqiniso, ukuthenga kithi, kuzodingeka inkinobho ekupheleni lokhu post blog.
Ixhuma ezimbili Switzerland kakhulu ebabazekayo entabeni zokungcebeleka, Zermatt futhi St Moritz, the Glacier Express yindlela okuphumuzayo kakhulu njengokungathi sijabulela indawo enhle ngendlela ekhexisayo Ngaya Okhahlamba LwaseSwitzerland. Kungani oyikhethile lokhu njengoba omunye abadumile kakhulu futhi zomlando imizila isitimela kufanele uthathe e 2019?
Okuhambayo ngasempumalanga kwaseBeti Zermatt, usuku lonke uhambo nesembozo 91 imihubhe 291 amabhuloho njengoba Rolls esidlule eningizimu Switzerland alpine nezimfunda, acwebile amachibi entabeni, nakweminye emincanyana isithombe-ephelele. Imibiko Evelele Yonyaka uhambo zihlanganisa Oberalp Pass, iphuzu esiphezulu ride ngesikhathi 6706 izinyawo. Enye iyona edume Landwasser Viaduct - elihle eziyisithupha-lwaleli isakhiwo ukuma 200 izinyawo futhi ezingena ibe Umhubhe usike ngqo entabeni.
Interlaken ukuze Zermatt Izitimela
ILucerne kumathikithi eZitimela Zermatt
West Highland Line, Glasgow ukuze Mallaig - Scotland
Sisabhekene umlutha ochungechungeni TV Outlander, egxile ezindala-school Scotland Highlanders. Ngakho kukhona akumangalisi lokhu kuvuliwe uhlu Famous and Historical zemininingwane Imizila. I West Highland Line kuyindlela enhle ukuzwa zasendle wezwe, olusentshonalanga. Uma isitimela eshiya Glasgow - idolobha Scotland sika enkulu - nalezo esezithuthukiswe ngokushesha enqotshwa elinothe glens futhi lochs ethulile. Isihloko ngasenyakatho, ENtshonalanga Highland Line sidlula ehlane eqhelile Rannoch Moor. It ke uphasisa ezinde Ben Nevis, Ngokuthinta phansi e Fort William. Ukushintsha ama isiqondiso futhi ezihambayo ngasentshonalanga, isitimela unqamula lo Glenfinnan Viaduct (evezwe Harry Potter ifilimu uchungechunge) ngaphambi kokufika ethekwini ophithizelayo ka Mallaig.
Amsterdam ukuya eLondon amathikithi
ILyon eya amathikithi eLondon eLondon
Famous and Historical zemininingwane Imizila eNgilandi
Passenger wesitimela travel wayengomunye walaba iminikelo omkhulu waseBrithani we uVictoria Ubudala. Ekhulwini lama-20, kubonakale ujantshi ngomdlandla ujantshi hobbyists ukuba ziye zanda cishe okushesha njengokungena nojantshi ngokwabo. Sezomlando izitimela umusi, ekhethekile kulolu hambo ebabazekayo, futhi ayibanzi gauge nojantshi usubuyiselwe. Lapha, uzothola ezinye best umusi isitimela kanye namagugu ujantshi kulolu hambo. Zithole in the izifunda West Izwe Cornwall, Devon, Somerset, futhi Dorset.
Njengoba okuningi lezi izitimela zibuyiselwe umusi izitimela, Londoloza Isitimela alinikezi amathikithi kubo. Nokho, senza ukunikeza intengo engcono ukuthola futhi kusukela i-United Kingdom.
Ufuna ukuzwa Famous yomlando imizila isitimela?
Inhloko phezu kuya Londoloza Isitimela futhi ukubhuka ithikithi lakho e 3 amaminithi.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit nge isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-historical-train-routes%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml futhi ungakwazi ukushintsha / ru ukuba / es noma / de futhi ngezilimi ezingaphezu.
#abadumile	#FamousTrains	#HistoricTrains	i-europetravel	uhambo olude	TrainStation	amathiphu isitimela	Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi